1.2 Play DLNA Content -
Nkebi nke 1: Okwu Mmalite maka km Player na VLC Player
Part 2: km Player Nyocha
Part 3: VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ reviews
Km Player mbụ aha nke bụ K-Multimedia ọkpụkpọ bụ mgbasa ozi ọkpụkpọ na e nanị mepụtara maka windows na ọ na-akwado fọrọ nke nta ọ bụla usoro na windows nwere ike igwu. The akwado formats nwere a dịgasị iche iche na mmekọrita a ọkpụkpọ na kasị nkịtị ndị na-VCD, DVD, AVI, MKV, Ogg na OGM. Mgbe ọ na-abịa na-ewu ewu mgbe ahụ, ọ bụ uru banyere na ọkpụkpọ nwere ike onye ọrụ na-esonụ na maka otu ihe The Independent download weebụsaịtị ekwe ka ndị ọrụ bụghị nanị ibudata ọkpụkpọ kamakwa na dịruru ya iji jide n'aka na ọhụrụ ọrụ nwere ike agụ reviews tupu ha ibudata ọkpụkpọ. The mbụ ede akwụkwọ nke ọkpụkpọ bụ Kang Yong Huee ọ na-e mepụtara site na Pandora TV. Mgbe ọ na-abịa na-emepe emepe na-asụ asụsụ ahụ na ọ bụ ihe ịtụnanya ịhụ na isi asụsụ nhọrọ e mewo ka na nke a na-eme ka n'aka na ọrụ ga-esi na ọrụ na maka otu ihe C ++, Delphi na Net obosara e ji mee ka a ọkpụkpọ dị ka otu n'ime egwu media Player niile ugboro. The ọkpụkpọ e mepụtara n'afọ 2002 na anụ ntọhapụ nke a dị oke egwu software wee ke afọ 2015 mgbe na February ụlọ ọrụ mara ọkwa na km ọkpụkpọ bụ ugbu a na e sụrụ ọ bụla chinchi na ọrụ n'oge gara aga ihu. The ukara website bụ http://www.kmplayer.com na ọ na-akwado site na n'asụsụ nile bụ isi nke ụwa.
Ọfọn VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ maa achoghidi mmeghe na maka otu ihe ahụ ọ na-ka ndị mmadụ mara n'ụwa nile na a egwu ọkpụkpọ hapụrụ a akara na ahịa n'oge na-adịghị mgbe ya ntọhapụ afọ 14 azụ na 2001. E Dere C, C ++ na Ebumnuche C ọkpụkpọ e mepụtara site VideoLAN na yiri nyiwe na ọ na-akwado ndị IA-32, x64, ARM na PowerPC. Ọ nwere ụda onye ọrụ isi n'ụwa nile na maka otu ihe ahụ ọ na-ahuta ka otu n'ime ndị kasị ezigbo iberibe technology niile ugboro. Nnọọ ole na ole ndị mmadụ mara na echiche nke VLC sitere na 1996 na isi nzube ibido ya bụ ime ka n'aka na videos na-streamed ofụri mahadum campuses n'ụwa nile site a satellite njikọ nke a raara maka izi nzube ma dị ka Facebook ndị ewu ewu na nke software ụba n'elu oge na ya mere ọ na-adịghị eji ugbu a, n'ihi izi nzube naanị kama Mmepe na-ugbu a-agbalị ime ka n'aka na-eme n'ọdịnihu na IMAX-eme ihe nkiri technology na-agbakwunyere n'ime ọkpụkpọ iji jide n'aka na ihe kasị mma na-nyere ka ahịa n'efu. The ọkpụkpọ esetịpụ akwụkwọ ikike nke GNU GPL v2 + na GNU LGPLv2.1 + nke na-eme ya otu n'ime ndị kasị authenticated Player na ụwa. Ọ na-akwado nta ọ bụla video format nke ụwa n'ụzọ dị irè.
Nkebi nke 2: atọ km Player Nyocha
The atọ kasị nkịtị reviews nke km Player e si Softpedia, Tech Nkwado Talert na onye ọrụ nyochaa na e lere ọtụtụ n'ime oge na Softnic. Nwoke URLs ndị dị ka ndị:
The nwere ike atụmatụ na-agụnye usoro nkwado, egwu ahịa ọrụ na amamiihe omume oge. Mgbe ọ na-abịa cons nke software mgbe ahụ, ọ bụ na--ahụ kwuru na naanị nke ọrụ nwere na nke a ọkpụkpọ bụ na ha na-adịghị ike na-site na elu atụmatụ ka ha e mere kwa mgbagwoju. -Esonụ bụ screenshot nke nyochaa bụ:
Onye ọrụ bụ nke echiche bụ na ọhụrụ mbipute nke km mgbasa ozi ọkpụkpọ adịghị nwere Ac3 / DTS Audio codecs nke maa kere a mmekpahu. Ezumike niile bụ OK na ọkpụkpọ a họọrọ elu. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na reviews e anya site ahịa ọtụtụ ndị ugboro:
Tech Nkwado Talert
Nyocha ọkpụkpọ dị ka otu nke kasị mma uzo ozo nke ọ bụla ọkpụkpọ na dị ahịa ka ọ bụghị nanị ìhè ma echichi bụkwa nnọọ mfe na codec bundles ekwe ka onye ọrụ iji jide n'aka na onye ọ bụla video ọ bụla format na-egwuri enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. The website na-atụ aro na km ọkpụkpọ ndị na-achọ a freebie ma a dị ike ọkpụkpọ na-eme ọrụ maka ha.
Nkebi nke 3: VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ reviews
The reviews e weere si Tech Rada, snap Files na oi Nkwado Talert. The URL na reviews e dere na otu iji:
The website bụ nke nyochaa na VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ bụ ike kacha ike na atụmatụ juru n'ọnụ ọkpụkpọ na a onye ọrụ nwere ike inwe ihe ọ bụla oge free ụgwọ site website. Ọ bụ kacha mgbasa ozi ọkpụkpọ dị ka kwa ha na ndị ọrụ na mbụ nwere ike na-esiri ike na-eji atụmatụ ma n'otu oge ahụ ha na-nke echiche na na Itie oge onye ọrụ ga-esi mara atụmatụ:
Ka kwupụtara ọkpụkpọ dị ka otu n'ime ndị Player nke a ga-ọnụ dị ka atụmatụ ọ na-enye bụ ala nke na nkà na egwu. The interface bụ egwu na-enye ohere ọrụ na nke kacha mma na-eji njikwa mfe. Ndepụta na-agụnye A / V nzacha na mmetụta, media Ọbá akwụkwọ na playlist s. The download njikọ nwekwara e nyere site website na nke a:
Kpọọ VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ dị ka otu kasị siri ike software omume niile ugboro onye ọrụ nke adabere n'elu eziokwu na onye ọrụ kwesịrị ịgbalị iji melite ojiji na Itie oge, o yiri ka website bụ nke echiche na ọ bụ naanị onye ọrụ omume nke ga-abịa elu na nke kacha mma software ibe ke n'ọdịnihu dị ka nmepe nanị ịdabere na ya:
> Resource> VLC> KMplayer vs VLC Media Player, nke bụ mma otu